Fri, Jun 5, 2020 at 9:06pm
यार्सागुम्बा संकलन शुरु, स्थानीय विद्यालयहरु ३ महिनाका लागि बन्द
बझाङ, ३१ वैशाख : सुर्मा गाउँपालिकाको धनसेरी वन सुरक्षा समितिले यार्सागुम्बा संकलनमा वैशाख १६ गते रोक लगाएको थियो । तर वैशाखको अन्तिममा यार्सा संकलन गर्न खुला गरेपछि यहाँका स्थानीयबासिन्दा खुशी भएका छन र यार्सागुम्बा संकलन गर्ने क्रममा जिल्लाका दर्जनाँै विद्यालय बन्द भएका छन् । यार्सा संकलन गर्दा सबैजसो घरबाट बालकदेखि हिडडुल गर्नसक्ने वृद्धसम्म यार्सा संकलन गर्न जाँदा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता..
कारागार झुम्कामा मुढा बनाएर आय आर्जन गर्दै कैदीबन्दी
इनरुवा, २८ वैशाख सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा रहेको क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा रहेका ६०० भन्दा बढी कैदीबन्दीले मुढा बनाएर आय आर्जन गरिरहेका छन् । विभिन्न कारणले जेल जीवन व्यतित गरिरहेका कैदीबन्दी जेलभित्रै मुढा बनाएर आय आर्जन गर्दैआएका छन् । जेलका चौकीदार खड्ग राईका अनुसार कैदीबन्दीले मुढा बनाएर मासिक रु नौ हजारदेखि रु १२ हजारसम्म आम्दानी गर्दैआएका छन् । “कैदीबन्दीले मासिक पाँच हजारभन्दा बढी मुढा निर्माण..
माहुतेको जिन्दगी : ‘शुरुमा त हात्ती नजिक जानै डर लाग्थ्यो, अहिले त साथी जस्तै लाग्छ’
भीमदत्तनगर, २६ वैशाख कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१४ नयाँ बस्तीका ३० वर्षीय तौला राना बुधबार यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको घाँसे मैदानमा रहेको हात्तीसारमा कुची बनाउँदै गर्दा भेटिए । कुर्ची अर्थात (घाँस, धान, गुड र नुन) बाट बनेको हात्तीको आहारा बनाउँदै भेटिएका पालुवा हात्तीको ‘पछुवा’ पदमा कार्यरत राना आठ वर्ष अघि शुक्लाफाँटा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतको भान्सामा काम गर्दथे । शुक्लाफाँटामा हात्तीको रेखदेख गर्न पछुवा पदमा..
पेट नघटेर हैरान हुनुभएको छ ? यस्ता छन् प्राकृतिक उपायहरु :
काठमाडौँ, बैशाख २३ अहिलेको धेरैको टाउको दुखाई बनेको छ, पुट्ट पेट । अर्थात भूँडी । स्वभाविक भन्दा ठूलो भुँडीले ज्यानलाई भद्दा देखाउँछ । भद्दा मात्र देखाउने होइन, रोगलाई समेत निम्त्याउँछ । त्यसैले अहिले भूँडी घटाउने कुरामा धेरैको चासो र चर्चा हुन्छ । भूँडी कसरी घटाउने त ? खाना नखाएर ? दौडिएर ? जिम गरेर ? औषधी खाएर ? शल्यक्रिय गरेर ? भुँडी लाग्नुका धेरै..
पुरुषहरुलाई ठूलो नितम्ब मन पर्नुको यस्तो रहेछ वैज्ञानिक कारण .....
एजेन्सी, बैशाख १४ आधुनिक पुरुषहरुले सलक्कको जिउ भएका, कम्मर छिनेका तर पुष्ट छाति र चौडा नितम्ब भएका महिलाहरु मन पराउँछन् भन्ने आम मान्यता छ । यो वैज्ञानिक सत्य पनि हो । सायद आधुनिकताको कारण जिउडाल तथा फेसनमा भएको परिवर्तनका कारण पुरुषको नजर महिलाको नितम्बमा पुगेको हो की ? भन्ने अनुमान धेरैको हुनसक्छ । तर, वैज्ञानिकहरुका अनुसार केवल आधुनिक युगका पुरुषहरुले मात्र महिलाको चौडा..
चलचित्रबाट चर्चा र सफलता दुवै हात पार्ने साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी
काठमाडौं ,१३ वैशाख डेब्यु चलचित्रबाट चर्चा र सफलता दुवै हात पार्ने कमै सेलिब्रेटी छन् नेपाली चलचित्र नगरीमा । यो मामिलामा भाग्यमानी अभिनेत्री हुन् साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह । साम्राज्ञीले पहिलो चलचित्र ‘ड्रिम्स’बाटै सफलता र चर्चा दुबै पाउन सफल भइन् । यहीँबाट उनी चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित समेत भइन् । डेब्यु चलचित्रले उनलाई सम्भावना बोकेको नायिकाको रुपमा मात्र उभ्याएन, अफरको ओहिरो पनि दिलायो ।..
बिहे भएको २५ वर्ष बितिसक्यो तर पनि नागरिकता पाइनन् ललिताले
गौशाला, १२ वैशाख : महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाकी ४० वर्षीया ललितादेवी पासवानको बिहे भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् । पिपरा गाउँपालिका–१ बस्ने शत्रुघन पासवानकी पत्नी ४० वर्षीया ललिताका चार सन्तान पनि रहेका छन् तर उनले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । धनुषा जिल्लाको खरिहानी माइती रहेकी ललिताले २०५० सालमा शत्रुघन पासवानसँग विवाह भएको र सोही बेलादेखि नागरिकता बनाइदिन..
डिभोर्स माग गर्दै श्रीमान नगरपालिकामा धाउदै , श्रीमतीलाई एक्ल्याउने दाउ खोज्दै
सप्तरी ७, बैशाख : राजविराज नगरपालिकामा परेका विभिन्न उजुरीमध्ये सम्बन्धविच्छेदका उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । त्यसरी सम्बन्धविच्छेदको माग गर्ने सबै पुरुष छन् । अन्तरजातीय बिहे गर्ने, प्रेम विवाह गर्ने र दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषसमेत छोडपत्रको निवेदन बोकेर नगरपालिकामा पुगेका छन् । राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ का ओमप्रकाश दासले ०७० साल जेठ १९ गते दोस्रो विवाह गरे । पहिली पत्नीको निधन भएपछि..
“यहीं पनि धेरै कुरा छ, पैसा कमाउनका लागि भन्दै विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन !”
काठमाडौं, चैत्र । सन् १९९० सालमा चितवनको गुञ्जनगरमा जन्मिएका प्रकाश गुरुङ निकै छोटो समयमै एक युवा उद्यमीकारुपमा स्थापित भइसकेका छन् । आफ्नो गृहनगर चितवनबाटै व्यवस्थापनमा स्नातक सकेर रोजगारको शिलशिलामा भारतको चण्डीगढ पुगेका उनी हाल नर्थ इण्डियामा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसका साथै यिनै युवा उद्यमी गुरुङकै लगानीमा राजधानी काठमाडौंस्थित मीनभवनमा पानोस रोष्टो सञ्चालनमा छ । नेपाल र भारत..
कपाल फुलेको छ ? थाहा पाउनुहोस् के कारणले फुल्छ कपाल
काठमाण्डु, १५ चैत बुढ्यौली लाग्दै गएपछि कपाल फुल्नु सामान्य हो तर आजकल धेरै मानिसलाई सानै उमेरमा कपाल सेतो हुने समस्याले सताउँछ । भिटामिन बी, आइरन, कपर र आयोडिनजस्ता पोषण तत्वको कमी हुँदा कम उमेरमै कपाल फुल्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्ता तत्वयुक्त खाना सेवन गर्न आवश्यक हुन्छ । बूढेसकालमा फुल्ने कपाल अल्पायुमै पनि फुलेको देखिन्छ । कपाल मुख्य चार कारणले फुल्ने गर्दछ ।..
डा टोनी हेगनले खिचेका काठमाडौँ उपत्यकाका तस्वीरको प्रदर्शनी शुरु
भक्तपुर, १३ चैत : स्विजरल्याण्डका भूगर्भविद डा टोनी हेगनले १९५० को दशकमा नेपालमा रहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा खिचेका तस्वीरको प्रदर्शनी सोमबार साँझदेखि यहाँ शुरु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका गछेँस्थित सम्पदा संरक्षणकर्मी रवीन्द्र पुरीको टोनी हेगन हाउसमा शुरु भएको प्रदर्शनीको सोमबार साँझ हेगनकी छोरी केट्रिन हेगनले उद्घाटन गरेकी हुन् । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुरलगायतका पुरातात्विक सम्पदा, ऐतिहासिक संरचना, ऐतिहासिक पोखरी, विश्व सम्पदा सूचीमा..
शरीरको मसल्स बनाउन के-कस्ता खानेकुराहरु खाने ? थाहा पाउनुहोस
काठमाडौँ, ५ चैत अहिलेका युवा फिटनेसमा निकै ख्याल राख्छन् । कसैले जिम गरेपनि राम्रो शरीर बनिरहेको हुँदैन तसर्थ मसल्स बनाउन जिम संगै खानेकुरामा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । धेरै मानिस मसल्स बनाउन फिटनेस र जिम धाउने गर्छन् । तर, खानेकुरामा भने अनभिज्ञ हुन्छन् । मसल्स निर्माणका लागि व्यायाम गरेर मात्र पुग्दैन, खानामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उसो भए के..
सेक्स सम्बन्धि थाहा पाउनै पर्ने महत्वपूर्ण केही रोचक तथ्यहरु
तपाईलाई लाग्ला, मैले सेक्सको बारेमा सबै कुरा जानेको छु, बुझेको छु । यसबारे सामान्य सबै जानकारी मसँग छ । तर त्यस्तो होइन, सेक्स सम्बन्धी केही यस्ता रोचक तथ्यहरु छन्, जुन कुरा थाहा पाएर तपाईं छक्क पर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रोमा सेक्स काम भन्दा बढी कुराको बिषय बन्ने गरेको छ । तर हामीले यसको बारेमा रोचक तथ्यहरु थाहा नपाइरहेका हुनसक्छौं । आउनुहोस्,..
किन हुन्छ सम्बन्ध विच्छेद ? के हुन् यसका साइड इफेक्ट
काठमाडौँ फागुन ३० केही समययता हामीकहाँ सम्बन्ध विच्छेदका क्रम बढेका छन् । राम्रै घरबार गरिरहेका सेलिब्रेटी दम्पतीहरु आपसमा छुटिए । बालबच्चा हुर्काइसकेका कति दम्पतीले समेत आपसमा अलग हुने निर्णय लिए । सम्बन्ध विच्छेद आफैमा समधान होइन । समस्या पनि होइन । तर, यसले समस्या भने निम्त्याउँछ । जब पति-पत्नी अलग हुन्छन्, त्यसको असर उनीहरुले मात्र झेल्नुपर्दैन । यसको सबैभन्दा ठूलो असर त..
एउटा अनौठो कथा : समलिंगी नभएपनि मैले किन महिलासँगै जीवन बिताउने निधो गरेँ?
म र मेरी साथी समलिङ्गी होइनौँ अर्थात् हामी एकअर्काप्रति शारीरिक रूपमा आकर्षित छैनौँ। हामीबीचको आकर्षण आत्मक हो। यसकारण विगत करिब ४० वर्षदेखि हामीसँगै बस्दै आएका हौँ। अहिले हामी ७० वर्षका भयौँ। सँगै बस्ने निधो गर्ने बेला हामी करिब ३० वर्षका थियौँ। जवानीका बेला हामीलाई आत्मसन्तुष्टिको चाह थियो। मलाई पनि र उनलाई पनि। म र मेरी साथी दुईजनासँगै बस्ने निधो गर्नुको सबैभन्दा..
पुरुषको तुलनामा किन महिलालाई चिसो बढी लाग्छ ? जानी राखौं
काठमाडौँ २५ फागुन विभिन्न अनुसन्धान अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी चिसो अनुभव हुने कुराको पुष्टि गरिएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार २ देखि ३ डिग्री सेल्सिअस बढी तापक्रममा सहज अनुभव हुने बताएका छन्। आखिर यस्तो किन हुन्छ त? यूकेस्थित पोर्ट्स्मथ विश्वविद्यालयकी शरीरशास्त्री डा क्लेर एग्लिनको व्याख्या अली फरक छ। उनका अनुसार पुरुष भन्दा महिलाले चिसो महसुस अली नै बढी गर्छन् । मानिसको शरीरमा चिसो..
हेप्पी होली : बसन्तपुर लगायतका स्थानमा सर्वसाधारणदेखि कलाकारसम्म (९ फोटो)
काठमाडौं, फागुन १८ । रङ्गहरुको पर्व होली देशभर नै हर्षोल्लाषका साथ मनाइएको छ । होलीका अवसरमा युवा, युवती, बच्चादेखि बृद्धसम्म विभिन्न रंगमा रमाउँदै र एक आपसमा सद्भाव साटा–साट गर्दै रमाउने गर्दछन् । फागुन शुक्ल पूर्णिमाको अवसर पारेर हर्षोल्लाषका साथ मनाइने होली पर्व बिहीबार देशभरका अधिकांश स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ । काठमाडौँमा फागु पर्वका अवसरमा प्रशंसकका साथमा कलाकार । तस्वीर..
प्राणायाम उच्चारण गरेमात्र धेरै फाइदाहरु हुने, जानौं प्राणायामका फाइदाहरु
काठमाडौँ , ११ फागुन । भनिन्छ ॐ ध्वनि नै यो ब्रम्हाण्डमा निस्किएको पहिलो आवाज हो यधपी यो कुरो लाई नमान्नेहरु पनि उत्तिकै मात्रामा भेटिएलान् । यो उच्चारण गर्द मनमा आनन्द त मिल्छ नै साथै मनको डर समेत हटेर जाने बताईन्छ । यो सही तरिकाले कसरी उच्चारण गर्ने त ? सर्बप्रथम यो प्राणायाम गर्दा सबैभन्दा पहिला आसन छनोट गर्नुपर्छ । यसको उपयोगी र..
के तपाईंलाई थाहा छ खानालगत्तै पानी पिउँदा के हुन्छ ?
काठमाडौं, फागुन ४ । के तपाईंको खाना खाएलगत्तै पानी पिउने बानी छ ? छ भने याद राख्नुहोस आयुर्वेदको अनुसार खाना खाए लगत्तै पानी पिउनु भनेको विष पिउनु सरह नै हो । यो कुरो सरासर सत्य हो कि पर्याप्त पानी पिउने मानिस पानी नपिउने मानिसको तुलनामा धेरै नै निरोगी हुन्छन् । यो कुरोमा कुनै दोधार नै छैन कि हाम्रो स्वस्थ जीवनका लागि..
मानिसका ६ घातक बानीहरु, नछोडे गर्ला धेरै हानी
काठमाडौँ फागुन ३ । मानिसहरुको धेरै बानी हुन्छ तर ति मध्ये यस्ता बानी पनि हुन्छन जसले हामीलाई अन्जान मै हानी गरिरहेका हुन्छन । थाहा पाउनुहोस् मानिसका त्यस्ता बानीहरु : बढी पानी पानी शरीरका लागि अत्यावश्यक तरल पदार्थ हो । तर, यसको बढी प्रयोगले पनि शरीरलाई हानि गर्छ । जसले आवश्यकभन्दा बढी पानी पिउँछ, उसलाई कैयौँ रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । आफ्नो शरीरका लागि..
मोटी केटीलाई बिहे गरे फाइदै-फाइदा !
एजेन्सी : काठमाडौं, फागुन २ । अहिले प्राय: युवतीहरु आफुलाई फिट राख्न चाहन्छन् । अझ भनौं अहिले त ट्रन्ड नै चलिसकेको छ कि, पातलो ज्यान भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्यान भएकी केटी नै पर्छिन् । तर आज हामी यस्तो सत्यताबारे बताउँदै छौं, जो जानेर तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग बिवाह गर्न मनाही गर्नुहुने..
बच्चाको हाइट नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस ?
काठमाण्डौ, फागुन २ । हाईट बढ्नु अथवा नबढ्नुमा वंशाणुगतगुणको ठुलो भुमिका हुन्छ । तर पनि त्यस्ता केहि उपाए छन् जस्ले तपाइको बच्चाको हाइट बढाउन निकै सहयोग गर्छ । ति उपाएहरु यसप्रकार रहेका छन्: १. बढ्दै गरेका बालबालिका निद्रा पुग्ने गरी सुतेका छन् कि छैनन्, ध्यान दिनुहोस् । उनीहरुका लागि कम्तीमा पनि १० देखि १२ घन्टा सुत्नु आवश्यक छ । सुत्दा ग्रोथ हार्मोन..
थाहा पाउनुहोस कुन राशीका व्यक्तिले कस्तो पर्स बोक्ने ?
एजेन्सी, फागुन १ । के तपाई ज्योतिषबिद्द्यामा विश्वास गर्नु हुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने यो कुरा पनि विश्वास गर्नुहोस कि भिन्न राषीका मानिसले भिन्न रंगको पर्स बोके लाभ हुन्छ । ज्योतिषका अनुसार कुन्डलीमा यदी केही ग्रह दोष रहेको छ भने मानिसलाई पैसाको समस्या भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । ग्रह दोषबाट टाढा रहनका लागि कयौं उपायहरु रहेका छन् । यी उपायहरुबाट ग्रह अनुसार अशुभ प्रभावहरुमा..
भुलेर पनि नछोड्नुहोस यी ५ विशेषता भएका ब्वायफ्रेन्ड
काठमाडौं, माघ २९ । हरेक सम्बन्ध तब सफल हुन्छ जब त्यहाँ एक-अर्कामाथि बिस्वास गरिन्छ । भनिन्छ प्रत्येक सम्बन्ध धेरै सुन्दर हुन्छ, केवल दुवैमा प्रेम र विश्वास हुनुपर्छ। तपाइले सपनामा खोजेजस्तो जीवनसाथी पाउन मुस्किल नै छ । तपाइले आफ्नो पार्टनर पर्फेक्ट खोज्नु हुन्छ तर याद राख्नुस संसारमा कोहि पनि पर्फेक्ट हुदैन । यदि प्रेमी र प्रेमिकाको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्ने हो भने..
यस्ता स्वभावका हुन्छन शनिबार जन्मेका व्यक्तिहरु … !!!
२६ माघ, एजेन्सी: के तपाई ज्योतिसबिद्द्यामा विश्वास गर्नु हुन्छ ? यदि विश्वास छ भने यो पनि विश्वास गर्नुहोस कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । ज्योतिसबिद्द्याका अनुसार..
के तपाइलाई थाहा छ ? वाईन खानु तपाइको स्वास्थ्यको लागी फाईदाजनक छ
काठमाडौँ, २५ माघ । के तपाइलाई थाहा छ ? वाईन खानु तपाइको स्वास्थ्यको लागी फाईदाजनक छ । हालै मात्र एउटा अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने थोरै मात्रामा वाईन सेवन मष्तिष्कबाट विषाक्त कुराहरुको निस्कासनमा सहयोगी सावित हुने गर्छ । यसका साथै अल्जाईमरका विरामीहरुका लागि पनि रक्सीको थोरै सेवन फाईदाजनक नै छ । नेपाली समाजमा यस्ता धेरै भनाईहरु पाईन्छ जहा मध्यपान गर्नुलाई सकारात्मक..
यि बानीहरु नछाडे पछुताउनु पर्ला !
मानिसहरुका विभिन्न किसिमका बानीहरु रहेका हुन्छन । ति मध्ये कुनैले हामीलाई सकारात्मक असर गरिरहेका हुन्छन भने कुनैले नकारात्मक प्रभाव परिरहेका हुन्छन अझ कुनैले त सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारको असर गरिरहेका हुन्छन । जानेर होस् वा नजानेर, हामीहरु उक्त काम गरिरहेका हुन्छौ । थाहा पाउनुहोस् हाम्रा के-के बानीले नकारात्मक असर गरिरहेका हुन्छन । नङ टोकिरहने कतिपय मानिसहरु अवचेतन अवस्थामा नै मुखभित्र औँला..
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशिल नायिकाहरुको डिभोर्सको घटनाहरु धेरै नै आउने गरेका छन् । बलिउड र हलिउडमा जस्तै नेपाली सिने जगतमा पनि यस्ता थुप्रै नायिकाहरु छन् जसको डिभोर्स भएर पनि चलचित्रमा सक्रिय रुपमा लागिरहेका छन् । कलाकारहरुको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हुनुलाई खासै नौलो कुराको रुपमा पनि हेरिदैन। सामन्य नै मानिन्छ । र डिभोर्स पछि दोस्रो विवाहलाई पनि सामान्य नै..
Results 746: You are at page 23 of 25